January 2012 ~ ကိုစောဂျက်
cpuid and testmyhardware နဲ့ computer ကို စစ်ရအောင်
21:09 Ko Saw No comments
ဒါက cpu-z Softwares ပါ။ ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပြုတာ CPU ဘယ်လောက်ကို တပ်ဆင်ထားသလဲ? ဟုတ်မဟုတ်၊ ? Memory ဘယ်လောက်လဲ? /Graphics ကဘာလဲ?/Mainboard ဘာအမျိုးအစာလဲ? စသည့်ဖြစ် မားသားဘုတ်ကို ဖွင့်ကြည်စရာမလိုပဲ အသေစိပ် စစ်ဆေးလိုရပါတယ်။3.MB ပဲရှိပါတယ်။
အလိုရှိသူများ အောက်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
CPU 1.59 setup downloads
ဒါမှမဟုတ်ရင် အောက်ကလင့်မှာ သွားရောက်
လေ့လာပြီး downloads လုပ်လိုရပါတယ်။ http://www.cpuid.com
ဒါမှမဟုတ် testmyhardware ဆိုတဲ့ softwares နဲ့ စစ်ဆေးလိုရပါတယ်။ key တွေ ဘာတွေမလိုပါဘူး။ testmyhardware ကို အလိုရှိသူ များ အောက်က လင့်မှာ downloads ဆွဲလို့ရပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် သူဆိုဒ်မှာ သွားပြီး downloads လုပ်လို့ရပါတယ်။. လင့်က ဒီမှာပါ။ http://www.testmyhardware.com/
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ......
သာလွန် မြန်မာ OS Download Tharlon v1.0
20:27 Ko Saw 1 comment
ဒါကတော့ လစ်နစ် စနစ်သုံး သာလွန် မြန်မာ OS ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ အလိုရှိသူများ သုံးလိုရအောင်ပြန်ပြီး လမ်းညွှန်ပေးတာပါ။ သူက မြန်မာစာ စနစ်နဲ့ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ windows xp / windows7တို့နဲ့လည်း ကွန်ပြုတာမှာ တွဲသုံးလိုရပါတယ်။ windows တင်ရတာလည်း အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။ ကိုယ်သွင်းပြီးလို့ ပြီးသွားရင် စက်ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါကျရင် ပါဝါတက်ပြီးတာနဲ့ သာလွန်နဲ့ သုံးမလာ (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်တင်ထားတဲ့ windows နဲ့ သုံးမလာ ဆိုတာကို ရွှေးချယ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ သာလွန် OS ကို သွင်းတဲ့ အခါကျရင် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ windows ပိုင်း မဖျက်ပဲ တွဲပြီး သုံးမယ့်ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
သူအကြောင်းကို အသေးစိပ်သိချင်သူများ http://www.tharlon.org ကို သွားရောက်ပြီး လေ့လာကြည်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ သာလွန်ကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော မြန်မာစွယ်စုံကျမ်းပါတဲ့ အတွက်ပါ။ အဲဒီမှာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေ ဖတ်ရူလိုရပါတယ်။ သာလွန်ကို ဘယ်လို install သွင်းရမလဲဆိုတာကို ဒီလင့်မှာ http://www.tharlon.org/?p=76 သွားရောက် ဖတ်ရူလိုရပါတယ်။
အလိုရှိသူများ ဒီမှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
အဲဒီလင့်က downloads မရရင့် အောက်ကလင့်ကနေလည်း downloads ယူလိုရပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ထားပေးတာမဟုတ်ပါဘူး ;)
Blade and Sword (PC Game)
15:22 Ko Saw 1 comment
PhyoWai (G-Jay) Blade & Sword ဂိမ်းလေး ဒေါင်းချင်တယ်ရှာပေးပါဗျာ။
Blade and Sword ဂိမ်းကစားချင်တယ်ဆိုပြီး စီပုံမှာ လာအော်ထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တင်တာနောက်ကျတဲ့ အတွက် စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ သူမှာဆိုဒ်က လင့်ကနေပဲ ပြန်ပြီး ရှယ်ယာလုပ်လိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖိုင့် ၄ ဖိုင့်ခွဲထားပါတယ်။
Blade and Sword - RIP.rar.001
Blade and Sword - RIP.rar.002
Blade and Sword - RIP.rar.003
Blade and Sword - RIP.rar.004
Ever since Diablo blew the doors off of action-RPGs, we've seenaslew of imitators and emulators. Darkstone, Lionheart, Anachronox, Asheron's Call, Neocron--the list goes on forawhile. Some owe their origins more to Japanese console titles, and others at least offerafirst-person perspective. However, it's beenawhile sinceatitle came along that cut so closely to the original blockbuster.
filehippo.com မှာ downloads ဆွဲရအောင်
12:59 Ko Saw No comments
ဒီနေ့တော့ ဆိုဒ်တစ်ခုလောက်ကို လမ်းညွန်ပေးချင်ပါတယ်။ မသိသေးသူများ အတွက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ Windows တင်ပြီးရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ Softwares တွေကို downloads လုပ်ချင်တဲ့ အခါကျရင် http://www.filehippo.com/ မှာ သွားရောက် downloads လုပ်လိုရပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် ဗာရှင်းတွေနဲ့ အရင်ထွက်ပြီးသာ ဗာရှင်းတွေကိုပါ downloads လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူမှာ
Latest updates/ Popular software / Browsers and Plugins/Anti-Malware/Audio and Video/ File Sharing/Firewalls and Security/ CD and DVD Tools/Messaging and Chat/System Tuning/ Desktop/File Transfer/Compression and Backup/ Photos and Images/ Office and News/Networking and Admin/ Drivers နဲ့ Developer Tools ဆိုပြီး အခန်း ၁၉ ခန်းနဲ့ Softwares တွေ တင်ထားပေးပါလို့။ စိတ်ဝင်းစားသူများ ဒီ http://www.filehippo.com/ မှာ သွားရောက်လေ့လာပြီး downloads ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ ဂျာ........
Unlocker 1.9.1 and ID Unlocker 1.2
12:18 Ko Saw No comments
ဒါက Unlocker 1.9.1 ပါ။ ဓါတ်ပုံတွေ၊ဗီဒီယိုတွေ၊ ဖိုင်တွေ စတဲ့ data တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဖျက်တဲ့ အခါကျရင် အများစုက delete key နဲ့ပါ ဖျက်တာ များပါတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ဖျက်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊data တွေ စတဲ့ ဖိုင်တွေကို Recycle Bin ထဲမှာ ရောက်သွားပါတယ်။ Recycle Bin ကို ဖွင့်ပြီး ဖျက်ထားတဲ့ ဖိုင့်တွေ အားလုံးကို အပြင်ထုတ်ပြီး ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ မလိုအပ်လို data ဖိုင့်တွေကို ဖျက်မယ်ဆိုရင် Shift+del ကီးကို တွဲနှိပ်ပြီးဖျက်သင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တော်ရုံပြန်ရှာလို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒါမှ မဟုတ်.... ဖျက်မယ်ဖိုင့်တွေကို Right click နှိပ်ပြီး Unlocker ကနေ ဖျက်မယ့်ဆို၇င် Recycle Bin တို့ ဘာတို့ မပြောနဲ့ တော်ရုံ data Recover Softwares နဲ့တောင်ပြန်ရှာလို့ မရပါဘူး။ Windows တိုင်းမှာ Unlocker ပါတတ်ပါတယ်။ ဖိုင့်တွေမှာ Right Click နှိပ်ပြီးကြည်လိုက်ပါ။ ပုံက အတိုင်း ကြယ်ပုံလေးနဲ့ Unlocker ဆိုပြီး ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ သူက free Softwares ပါ။ တစ်ချို့ windows တွေမှာ မပါ၇င် Google မှာ ရှာပြီးယူလိုက်ပါ။ ရှာလိုမတတ်ရင် အောက်က လင့်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ သူရဲ့ ကောင်းချက် နောက်တစ်ခုက တစ်ချို့ဖိုင့်တွေဆိုရင် ဖျက်ရင် ဖျက်လို့မရတာတို့ Error တက်တာတို့ ဖြစ်တဲ့ ဖိုင့်တွေကိုလည်း ဖျက်ပေးပါတယ်။
downloads links 3
ဒါမှ မဟုတ် ID Unlocker 1.2 ကို အသုံးပြုချင်သူများ အတွက် အောက်က သူလုပ်နိုင်စွမ်းကို ဖတ်ရူပြီး အောက်က လင့်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
NETGATE Registry Cleaner 3_0
15:10 Ko Saw No comments
ဒါကတော့ NETGATE Registry Cleaner 3.0 ပါ။ သူလည်းပဲ PC cleaner Softwares တစ်မျိုးပါပဲ။ 7.MB ပဲရှိပါတယ်။ keygen ဖိုင့်ပါ အထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်တွေကို စက်မှာ စမ်းသုံးပြီး အဆင်ပြေမှ တင်ထားပေးတာပါ။ ရမ်းသမ်းပြိးတော့ တင်ထားပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
Serial number 4C092AA-EC87B28-B3EAF9A-DED4CAEB
သူရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို အောက်မှာ ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။
CleanMyPC Registry Cleaner 4_4 full keygen
14:50 Ko Saw No comments
ဒါက CleanMyPC Registry Cleaner ပါ။ အထဲမှာ Keygen ဖိုင့် ပါပါတယ်။ 3.MBပဲရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ယူလိုက်ပါ။
dpwnloads links 2
Name ; Team NOY
Serial ; 0FA0-D7D3-972F-3C47-4EA7-3882-735B-1F0D-2373-A3CE-9D47-9E78
သူရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေကို အောက်မှာ ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။
CleanMyPC Registry Cleaner scans the Windows registry and finds incorrect or obsolete information in the registry. By fixing these obsolete information in Windows registry,
13:03 Ko Saw No comments
ဘော်ဒါတစ်ယောက်က Windows7Manager ဆိုပြီး တောင်းနေတာ ကြာနေပါပြီး။ ခုမှ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘလော်မှာ ပိုစ့်အသစ်တွေ မတင်ဖြစ်တာလည်း ၁ လကျော်နေပါပြိး။ ဒီနေ့မှပဲပြန်တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ အားလုံး တောင်းဆိုတာတွေ ပြန်မတင်ပေးနိုင်ရင် ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နားလည်းပေးကြပါလို့ ဒီကနေပဲ အားလုံးကို တောင်းပန်းပါတယ်။ အားလုံးကိုပဲ ပြန်ဖြေ၊ပြန်တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာလည်း အခဏ်အခဲ့တွေ တစ်ချို့ကြောင့် အိမ်သာနက် နဲ့ ဝေးနေလိုပါ။ Windows7Manager ကို အောက်မှာ ကြည်ပြီး အဆင်ပြေမယ့် ဟာကို downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
ဒါက Windows7Manager 3.0.3 (x86/x64) full keygenပါ။
downloads links က အောက်မှာပါ
Windows7Manager 3.0.3 full keygen(14,45MB)
ဒါက Windows7Manager 3.0 full patch ပါ။
Windows7Manager 3.0_x64bit full patch(8,01MB)
Windows7Manager 3.0_x32bit full patch(8,01MB)
ဒါက Windows7Manager v2.1.7.0 Final full + keygen
ဒါက Windows7Manager 2.1.9 Final (x32/x64) final full Serial and Keygen
Windows7Manager 2.1.9 Final_x32 final full Serial and Keygen(6,13MB)
Windows7Manager 2.1.9 Final_x64 final full Serial and Keygen(6,32MB)
Only Crack Yamicsoft Windows7Manager 2.1.9(143,87KB)
သူရဲ့ အချက်အလက်တွေကို တော့ အောက်မှာ ဖတ်ရူကြည်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
WinASO Disk Cleaner 2_5_3 full keygen
12:36 Ko Saw No comments
ဒီ WinASO Disk Cleaner ကလည်း ကွန်ပြုတာကို Cleaner လုပ်ပေးတဲ့ Softwares တစ်မျိုးပါပဲ။ keygen ဖိုင့်ပါ အထဲမှာ ပါပါတယ်။2>MB တောင်မပြည့်ပါဘူး။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
downlods links 2
12:01 Ko Saw No comments
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြုတာတွေ ထဲကို ဗိုက်ရက်စ်တွေ အများဆုံး ဝင်ရောက်တဲ့ လမ်းကြောင်းက USB တွေက တစ်ဆင့် ဝင်ေ၇ာက်ကြတာ များပါတယ်။ အများအားဖြစ် ကွန်ပြုတာ အသုံးပြုသူတွေ Security ပိုင်း ဂရုမစိုက်လို့ ဝင်ရောက်ကြတာ များပါတယ်။ အဲဒီတွေ ကိုယ်ဖြစ်တော့ ကိုယ်ခံရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မဖြစ်ပဲနဲ့ ကိုယ်ခံရတာတွေ ရင်နှာဖိုကောင်းပါတယ်။ ဒီတင်ပေးလိုက်တဲ့ USB Disk Security က သူများဖြစ်တာတွေ ကိုယ်မခံရအောင် ကာကွယ်လိုသူများအတွက်ပါ။ crack ဖိုင့်ထည့်ထားပါတယ်။ install သွင်းပြီးရင် crack ဖိုင့်ထဲက USBGuard.exe ကို copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_USB Disk Security မှာ paste ချလိုက်ပါ။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ယူလိုက်ပါ။ 6.MB ပဲရှိပါတယ်။
cpuid and testmyhardware နဲ့ computer ကို စစ်ရအောင...